Samee JPG Muqaal ah Website | Jpeg, JPG Muqaal
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Muqaal ah ka JPG iyo jpeg Images
JPG, sidoo kale loo yaqaan jpeg, waa qaabka image ugu caansan u riixo sare ay, size yar oo tayo fiican. Maalmahan, camera iyo telefoonka gacanta ugu badbaadiyo sawiro laga qaaday in JPG ama jpeg format. In la wadaago sawiro aad online iyo xataa set TV, slideshow waa xulashadii koowaad.
Wondershare Flash Gallery Factory waa fududahay in la isticmaalo JPG slideshow software si ay u muujiyaan off sawiro aad online. Waxaad si fudud u dajiyaan yaabaa photos gal ah (ama sawiro gooni ah drive adag) oo waxaad ka samaysaa duubey ka dhisay-in template. Photos wuxuu muujin doonaa si loo cayimay iyo tayo sare leh. Eeg sida loo sameeyo slideshow JPG iyo wadaagaan on website sida hoos.
Samee JPG Muqaal ah ama Gallery
Waxaa jira arrimo badan oo slideshow ka mid Flash Gallery Factory in aad had iyo jeer ka heli karto sida ugu fiican si ay u muujiyaan off JPG sanamyadiinna. Marka furan barnaamijka, waxaad arki doontaa interface style saaxir ah oo ka dhigi slide JPG muujinaysaa talaabo talaabo ah. In la abuuro slideshow JPG ah ee file hal, waxaad u baahan tahay in ay sii wadaan habka Muqaal iyo badbaadin, sida qaab Jabbuuti. Barnaamijku wuxuu kaloo kuu ogolaanaysaa inaad la wadaagto aad slideshow JPG qaab ee HTML, XML, auto maamusho EXE, iyo baado shaashadda.
JPG iyo jpeg sokow, Flash Gallery Factory sidoo kale taageertaa qaabab kale images sida GIF, PNG, BMG, iwm sidoo kale sababta aan sameeyo Sidaas flash slideshow la sanamyadiinna PNG, BMP iyo GIF?
Sida loo Cudarada JPG Muqaal galay Website
Marka bandhiga slideshow JPG ah, oo aad inta badan ka heli doontaa bogga HTML ah. Haddii aad leedahay website-ka, kaliya aad u baahan tahay si ay u geliyaan bogga HTML iyo faylasha kale loo baahan yahay in folder la mid ah. Oo wixii aad ku slideshow waxaa lagu daabacay online qaabkaas. Halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo gacanta Cudarada aad duubey JPG galay bogagga internetka.
1.Get xeerka ama wax ka bedel kuu gaar ah mid ka mid ah. Code ayaa eegi doonaa sida hoos ku qoran.
<Classid wax = "clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase = "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.0.0" width = " 720 "height =" 540 "ID =" SF "VIEWASTEXT>
<Param name = "movie" Qiimaha = " Pic3.swf "/>
<Param name = "tayada" Qiimaha = "sare" />
<Param name = "wmode" Qiimaha = "hufan" />
<Param name = "allowScriptAccess" Qiimaha = "mar walba" />
<Param name = "allowFullScreen" Qiimaha = "run" />
<Cudarada SRC = " Pic3.swf "tayada =" sare "magac =" SF "allowScriptAccess =" mar walba "allowFullScreen =" run "pluginspage =" http://www.macromedia.com/go/getflashplayer "nooca =" codsiga / x-shockwave-flash "width =" 720 "height =" 540 "> </ socosho>
2.Paste code u dhexeeya <jirka> iyo </ jirka>.
3.Make hubiyo in cabbir (width iyo dhererka) waa qumman yihiin, iyo sidoo kale cinwaanka file Jabbuuti. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa cinwaanka file Jabbuuti oo ah sidan:
4.Save iyo Kulanka Xiisaha Leh.
Sidoo kale iska hubi ah hage user ee Flash Gallery Factory wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan slideshow abuurka jpeg.
Fiiro gaar ah : aad aan waxba badbaadin karin slideshow ah qaab JPG. Taasi waa wax aan macquul aheyn gebi ahaanba. JPG waa qaabka image ma guurto ah. Kala duwan ka JPG, waxaad ka dhigi kara slideshow ah ee GIF qaab kaas oo ah hal nooc oo ah qaabab animation. Eeg sida loo sameeyo slideshow GIF ah halkan.